Vavaka mfm 60 mfm manohitra ny toe-tsahin'ny tsy manambady | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 60 mfm vavaka manondro manohitra ny toe-tsaina momba ny tsy fananana
60 mfm vavaka manondro manohitra ny toe-tsaina momba ny tsy fananana
Tsy momba anao ny momba ny tsy fananana aina. Ny Eksodosy 23:25 dia milaza fa amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra ny tsy fiterahana dia tsy ho anjaranao velively. Ny faharerahana dia fanaintainan'ny devoly ary tsy afaka miresaka afa-tsy amin'ny fanovana vavaka. Nanangona teboka vavaka mirefy 60 mfm manohitra ny toe-tsaina momba momba. Ireo teboka momba ny vavaka dia nentanin'ny Dr Olukoya avy amin'ny tendrombohitra afo sy asa fanompoana fahagagana. Ny fanahin'ny fananana dia tena misy, nantsoina hoe fanahy very izy. Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny karazana tsy miteraka, anisan'izany ny tsy vokatry ny kibo. Tsy maintsy mitsangana ianao ary hivavaka amin'ireto vavaka mfm ireto mba hanafahana ny tenanao amin'ireo fanahy ratsy ireo.
Mivavaha amin'ny vavaka amin'ny finoana, antenaina ary hamangy anao Andriamanitra amin'ny fahasoavana hamangy anao anio amin'ny anaran'i Jesosy. Nitsidika an'i Saraha Andriamanitra, nitsidika an'i Elizabeth, tsy miova izy, hitsidika anao anio izy. Hoy izy noho ny fahamenaranao dia hahazo indroa heny ianao. Antenao ny kambanao, ny triplets, ny quadruplet ary ny maro hafa rehefa mamoaka ny fonao amin'ny Tomponao. Ireo vavaka mfm ireo dia manondro ny fanahin'ny maha-bomba dia hanome hery anao hiatrika ady ara-panahy. Hitako anao mizara ny fijoroanao ho vavolombelona androany amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny mivavaka 80 mfm manohitra ny toe-tsaina momba ny momba.
1. Ray ô, misaotra anao aho nanafaka ahy tamin'ny karazana fanandevozana rehetra.
2. Ry Raiko, ny ran'i Jesosy Zanakao no manasa ahy ny fahotako rehetra amin'ny fiainako, ao anatin'izany ny fahotana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Raiko ô, avelao ny famindram-ponao hanjaka amin'ny fitsarana rehetra amin'ny fiainako anio amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Tompo ô, mamelà ny heloko amin'ny fahotana rehetra manjo ahy amin'ny anaran'i Jesosy ..
5. Andriamanitra ô, amin'ny herin'ny anaran'ny jesosy, esory amiko amin'ny ota rehetra nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy.
6. Laviko ny fanoloran-tena ratsy sy ny fanambarana satanika napetraka teo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Tapaka ny didim-pitsarana ratsy rehetra sy ny fananganana demonia, amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Izaho dia mandà sy manafaka ny tenako avy amin'ny fanoloran-tena ratsy rehetra tao an-kiboko ho an'ny mpamosavy amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Mandidy ny alitara ratsy rehetra aho hiresaka ny hamoazao mba hianjera amin'ny afo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
10. Izaho dia manam-pahefana amin'ny fahefana satana rehetra miady amin'ny vokatro amin'ny anaran'i Jesosy.
11.Laviro, esory ny laza ratsy manohitra ny vokariko amin'ny anaran'i Jesosy.
12Maneho fahefana aho amin'ny ozona rehetra vokatry ny fanitsakitsahana ny fianianana nataoko tamin'ny razambentsika izay misy fiantraikany amin'ny vokam-poko amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Mandidy ny demonia rehetra mifandraika amin'ny voady nataon'ny ray aman-dreny ratsy fanahy sy fanoloran-tena handao ahy aho izao, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Oh Gkd, nitaona ahy tamin'ny fahotan'ny razako aho tamin'ny ran'i Jesosy sarobidy.
15. Manavaka ny ozona rehetra avy amin'ny razako mifangaro amin'ny anaran'i Jesosy aho.
16Dia mandidy ny ozona momba ny tsy miteraka, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Amin'ny fanendrena ny fanahy masina amin'ny fiainako dia manapaka ny ziogan'ny fanozonana tsy manambady ao amin'ny fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
18.Nandidy ny demonia rehetra mampijaly ny kiboko aho ary mandao ny tsy fahombiazana amin'ny fiainako, miaraka amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Ry Jesosy mpanasitrana, sitrano ny fahavoazana rehetra natao tamin'ny vatako sy taova fitomboana amin'ny anaran'i Jesosy.
20.Nesoriko sy navilako tao am-poko ny eritreritra rehetra, ny sary na ny sarin'ny tsy momba ny anaran'i Jesosy.
21. Izaho dia mandà ny fanahin'ny fisalasalana, ny tahotra sy ny fahakiviana amin'ny anaran'i Jesosy.
22.Nofoako ny fahatarana rehetra tsy araka an'Andriamanitra amin'ny fisehoan'ireo fahagagana nataoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
23.Amin'ny anjelin'Andriamanitra velona manakodia ny vato rehetra hisakana ny fisehoan'ireo fahatongavanako, amin'ny anaran'i Jesosy.
24.O ry Tompo, velomy ny teninao mba hanatanteraka azy amin'ny fanambadiana amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ry Tompo, valio haingana ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Tsy manaiky hiombon-kevitra amin'ireo fahavaloko mahavokatra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Ry Tompo, maniry ny lozam-pifamoivoizana amin'ny faritry ny vokatro amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Tompo ô, maniry ny hanan'anaka amin'ity herinandro ity, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Tompo ô, maniry ny hanana ny fahagagana nataoko aho izay nohamafisin'ireo mpitsabo tamin'ity volana ity, tamin'ny anaran'i Jesosy.
30. Ry Tompo, te hitondra ny triplets aho amin'ity taona ity, amin'ny anaran'i Jesosy.
31. Avelao hisy korontana, fandaminana indray, fanitsiana, fandaminana indray ary ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-javatra sy ny toe-javatra mba hanomezana lalana ny fisehoan'ny fahagagana tadiaviko, amin'ny anaran'i Jesosy.
32. Aoka ny loophole rehetra eo amin'ny fiainako izay nahatonga ny fahavalo hampahory fa nambara tamin'ny anaran'i Jesosy.
33. Lazaiko fa ny demonia mpanara-maso rehetra izay manara-maso ny ovulasi sy ny fanohintohako dia mandidy azy ireo handeha jamba amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy aho.
34 Ny Andriamanitr'i Elia izay mamaly amin'ny afo dia valio amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy.
35 Andriamanitra Izay namaly an'i Mosesy faingana teo amin'ny Ranomasina Mena, valio amin'ny afo aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Ilay Andriamanitra nanova ny loton'i Jabez dia valio amin'ny afo aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Ilay Andriamanitra izay mamelona sy miantso ireo zavatra tsy misy toa ireo dia valio aho amin'ny afo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
38. Aoka ny faritra rehetra amin'ny fiainako ho mafana noho ny ratsy rehetra honina, amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Ianao fitomboan'ny fibra ao amin'ny vatako dia hongotana sy esorina amin'ny vatako amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Avelao ny vatako handà ny fanao ratsy rehetra amin'ny aretina sy ny STD amin'ny vatako amin'ny anaran'i Jesosy.
41. Tompo ô, ambarako fa ny fahoriana rehetra amin'ny fanisan-jaza ambany dia sitrana ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
42. Laviko ny fanodinkodinana ratsy rehetra sy ny mpanodikodina amin'ny anaran'i Jesosy.
43. Izaho dia tapako ny herin'ny asan'ny maizina, ny ody sy ny fanahy mahalala ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
44. Ny tahiry satanika rehetra amin'ny tsinaiko izay manakana ny vokatro dia avy amin'ny ran'i Jesosy.Mandeha aho ary mandoaka azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
45. Manafaka sy mandoa ny sandam-bolan'i satana aho amin'ny anaran'i Jesosy.
47. Izaho no mamonjy sy mandefa ny fitahian'i satana rehetra ao an-kiboko, amin'ny anaran'i Jesosy.
48 .. Amin'ny Anaran'i Jesosy no ambarako eo alohan'ny herin'ny haizina rehetra, "Hateriko ny zazakeliko rehetra (farito ny isa) ary ny vavahadin'ny helo dia tsy manan-kery hanakana ahy" amin'ny anaran'i Jesosy.
49. Ry tanana vahiny nametraka ny kiboko, afaho amin'ny afo aho izao !!! amin'ny anaran'i Jesosy
50 .. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia mandà aho, manapaha sy manala ny tenako amin'ny vady ara-panahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
51. Raiko ô, manaova fahagagana iray amin'ny vatako ankehitriny, manolo ireo taova simba rehetra amin'ny vatako miaraka amin'ireo vaovao amin'ny anaran'i Jesosy.
52. Dada manafaka ahy amin'ny aretina rehetra mahafaty amin'ny anaran'i Jesosy.
53. Ray ô, sitrano aho amin'ny fahasimbana rehetra vokatry ny fanalan-jaza amin'ny anaran'i Jesosy.
54. Dada nanasa ny kibonao tamin'ny ranao tamin'ny anaran'i Jesosy
56. I Dada no fantson-doko fallopian amin'ny ranao amin'ny anaran'i Jesosy.
57. Aoka ny fahavalo rehetra aorin'ny fahasoavako haharihary sy mahamenatra amin'ny anaran'i Jesosy.
58. Dada tahaka ny nandehanako ho an'ny zaza niantso ny maro, dia avelao hiangona ao an-tranoko anio ny olona noho ny zanako mitondra anarana amin'ny anaran'i Jesosy.
59. Tompo ô, valio ny mpanaraby ahy, amin'ny fanolorany ahy ny zanako ny voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy.
60. Misaotra anao Ray noho ny namaliako ny fivavako tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratra40 Mfm vavaka manasongadina fitomboana ara-panahy
Next lahatsoratraTorohevitra 40 mfm momba ny fahatapahana ara-bola
Camelyne Okinda 29 aogositra 2020 Amin'ny 1:37 hariva
Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny vavaka etsy ambony misaotra ary nivavaka aho ary mbola hanohy hivavaka mandra-pahatanterak'Andriamanitra zavatra amin'ny kiboko, nisy olona nivoady fa hionona izahay raha tsy maty izy ary amin'ny teniny dia avelao Andriamanitra hanala baraka azy
Famakiana Baiboly isan'andro anio 19 Oktobra 2018
Fanafahana fanafahana mba hisorohana ny fahafatesana tsy misy fepetra